सीके र केपीलाई पत्याउन सकिन्न
भड्काउ, उत्तेजना र विध्वंसात्मक कामकुरा गर्नुपर्छ जनता आकर्षित हुन्छन् भन्ने भ्रम छ धेरे नेता, पार्टीलाई । २०५० को दशकमा माओवादीले यही रणनीति अपनायो । पहिले राजासँग वार्ता, गोलमेच सम्मेलन भन्दा भन्दै १० वर्षे जनयुद्ध नै गर्‍यो । वैशाख ११ को सम्झौता भए पछि मात्र विदेशी चलखेल र उक्साहटमा लागेर माओवादीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको माँग गरिदियो र गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा लोभ्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फसाएको हो ।
भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा घिसारेपछि भारत आदेश दिदै जाने र प्रचण्ड र गिरिजा मान्दै जाने गरेकाले आजको यो अराजक स्थितिको सिर्जना हुनपुगेको हो । राजासँग जे सम्झौता भएको थियो, राजनीतिक दलहरुले उल्लंघन गर्दै गए । राजनीतिक नैतिकताको प्रदर्शन सम्म पनि गर्न सकेनन् । भारतकै कारण र युरोअमेरिकन दबाबमा नेपाललाई जबरजस्ती संघीयतामा पुर्‍याइएको छ । संघीयताले उत्पन्न गरेका बिकृतिहरुलाई रोक्नसक्ने ताकत संविधान र ७६१ सरकारहरुमा देखिदैन । सबै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रमाउन थालेका छन् । एकातिर जातभात, भाष, रङ्, धर्म, क्षेत्रीयताको बिखण्डनवादी सोच, अराजकता सिर्जना भइरहेको छ ।
युरोअमेरिकनहरु एनजीओ र आइएनजीओमार्फत समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन् । तिनकै दबाबमा बिखण्डनवादी सीके राउतसँग दुई सरकारवीच गरेझैं ११ बुँदे सहमति गरेर गजबको नाटक देखाएको छ ओली सरकारले । सरकार भन्छ– यो उपलव्धि हो रे । बिखण्डनवादीलाई पुठ दिने कुरा कुन देशमा उपलव्धि हुन्छ । त्यसमाथि बिखण्डनवादी योजना छाडे भनेर सीके राउतले कहिले कहाँ भने, सरकार देखाउन सक्छ ? नेपालको राष्ट्रियताको धार छाडेर मूल धारका कुरा गर्छ ओली सरकार । सीके राउतले राष्ट्रिय गान बजाएर पार्टी बैठक गरे भनेर सरकार दङ्ग छ । देशलाई बेश्या भन्ने व्यक्ति वाल्मिकी बनेको प्रचारमा नेकपा लागेको छ ।
जेलभित्र भएको व्यक्तिलाई अदालतबाट छोड्न लगाएर रातारात मूलधारमा ल्याउने र भोलिपल्टै सम्झौता गरेर स्वागत गर्ने नेकपाको यो रमिता नभए के हो ? सीके राउतले उठाएका बिखण्डनवादी नारा न सरकारले खारेज गरेको छ, न सीके राउतले खारेज गरें भनेर प्रष्ट पारेका छन् । एकातिर रेशम चौधरी, अर्कोतिर सीके राउत, यो सरकारले दुईथरि नाटक देखाएर राजनीतिलाई मनोरञ्जक बनाइदिएको छ ।
जनताले १७ हजार परिवारजन मार्ने माओवादीलाई पहिलो संविधानसभामा मजाले जिताए । तिनै जनताले संविधान जारी भएपछि कांग्रेसलाई मजाले हराए । मान्छे मार्ने रेशमलाई सांसद जिताए, अव सीके राउतको जनमत पार्टीलाई मधेशको मसिहा बनाउन बेर छैन । अवको चुनावसम्म सीकेले मधेश देशका नाममा भोट माँग्छन् कि जनमत संग्रहकै लागि लड्छन्, यो बुझ्न केही समय पर्खनुपर्ला ।
फेरि सीके कुन उद्देश्का लागि मूलधारमा ल्याइए र भित्रभित्रै सीके राउत किन बिखण्डनकै मुद्दामा छन् ? उनी कतै चीनविरुद्धको कार्डका रुपमा अघि सारिएका भावी शक्ति त होइनन् ? पेण्डोराको बाकस खुल्दै जानेछन्, देखिदै जानेछन् ।
०९ सालदेखि हरेक १० वर्षमा असम्भव लाग्ने घटनाहरु हुने देश हो नेपाल । कम्युनिष्ट समाप्त पार्न खडा भएको इसाई अभियानमा मिसिएर नेपालका कम्युनिष्टले होली वाइन खाने कुरा कसरी सम्भव भयो ? यसकारण सीके राउतलाई एकाएक प्रचण्डको हाराहारीमा उकालेर सम्झौता भएको भनेर पत्याउनसकिन्न । रातारात भएको यो नयाँ घटना पत्याउन सकिन्न, भन्नैपर्छ यसमा केही न केही षडयन्त्र छ । दुवैको नियत प्रष्ट छैन, खोट छ । आम नेपालीका लागि यो सतर्कताको समय हो ।